Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Akwụkwọ akụkọ Wellbeing nwere Ken Kladouris
Na mbido afọ a, Ken Kladouris kwupụtara mmalite nke nkuzi ịntanetị a na -atụ anya ya nke akpọrọ "Ịga nke Ọma Ịga nke Ọma."
Ezubere nkuzi a iji nye usoro nkuzi nke enyere iji nyere ndị mmadụ aka ịbanye n'ime ka ha wee nweta ike ha niile.
Onye ọchụnta ego Ken Kladouris họọrọ ịzụlite onyinye a mgbe itinyechara ọtụtụ afọ n'ịzụlite onwe ya, ghọta otu esi enyere ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị aka ibuli onwe ha elu, uche, ahụ na mkpụrụ obi. Akụkụ nke njem Ken gụnyere ịlaghachi azụ na ịgbachi nkịtị ogologo oge, ya na nlọghachi nke atọ ya na nke kacha ọhụrụ yana nkuzi ya mụtara na -akọrọ Magazin Wellbeing.
Mgbapụ mgbachi nkịtị a kwa afọ bụ ezumike site na mmemme na Ken na -atụ anya ịnabata ndị na -agụsị akwụkwọ mmemme ya n'afọ ọzọ.
“Ọ bụ eziokwu ihe ha na-ekwu-njem ịmata onwe onye na-akawanye mma na itinye ego ọ bụla n'ime usoro a. A na m atụ anya ịkekọrịta ọbụna nghọta miri emi banyere nlọghachi azụ ikpeazụ m na -agbachi nkịtị na ndị otu Stillness to Success. ”
- Ken Kladouris